निर्मला प्रकरणमा 'भिआइपी' कनेक्सन (#WhoKilledNirmala शृङ्खला ९) :: PahiloPost
निर्मला प्रकरणमा 'भिआइपी' कनेक्सन (#WhoKilledNirmala शृङ्खला ९)
3rd December 2018, 07:28 pm | १७ मंसिर २०७५
काठमाडौँमा मंसिर ८ गते आयोजित जनसभामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले समेत भने, ‘सरकारका मान्छेहरु नै, सरकार चलाइराखेका मान्छेका छोराछोरी नै निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारमा संलग्न छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।'
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले त्यसको पाँच दिनपछि संसदमा घटनाबारे जानकारी गराउँदै भने, 'आफन्तले दिएको जानकारीका आधारमा दुई जनालाई पक्रिसकेका छौं- २२ वर्षका जीवन घर्ती मगर र १७ वर्षका दीपक नेगी।'
पछि थाहा भयो, गृह मन्त्रीले अभियुक्त भनेर चिनाएका एक जना यौन रोगी र अर्का 'खुकुरी हानेर निर्मलालाई मारेको हुँ' भन्ने मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका व्यक्ति रहेछन्। घटनामा संलग्न नभएको देखिएपछि उनीहरु रिहा त भए तर सरकारले नक्कली अपराधी खडा गर्ने प्रयास गरिरहेको सन्देश गृहमन्त्रीको त्यही वक्तव्यले दियो।
जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्न निजामति कर्मचारी अयोग्य रहेको बताउँछन् पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी। उनी भन्छन्, 'निजामति कर्मचारीले प्रहरीले गर्ने किसिमको अनुसन्धान गर्नै सक्दैन।'
केसी भन्छन्, ‘पूर्व प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुलाई भने अनुसन्धानमा सहभागी गराउन सकिन्छ।'
छानबिन समितिका सदस्यको 'प्रोपोगान्डा'
गृहमन्त्री बादलले सार्वजनिक रुपमा भन्दै हिँडे – 'छानबिन हुँदैछ, निर्मलाको हत्यारा चाँडै पत्ता लाग्छ।'
उनले त्यही पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘भदौ १५ गते एक्लै निर्मलाको साइकल भेटिएको स्थानमा छानबिन गर्न गएको बेला मोटरसाइकलमा एउटा मोटो मान्छे आयो। ‘सर तपाईँको काम चाहिँ एकदमै सराहनीय छ। तर, यहाँ चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि ट्रकमा ब्रेक फेल भयो भनेर किचेर मारेका छन्। अरू साथी खोइ तपाईँको? भनेर सोधे। मैले उहाँहरू अलिक अगाडि हुनुहुन्छ भन्ने जवाफ दिएको थिएँ। म पानी नाप्न गइरहेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो सार्कीलाई पनि ब्रेक फेल भनेर मारेका थिए। तपाईँ पनि ख्याल गर्नुहोस् है।'
सोमबार हामीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले भने, ‘अहिले यो विषयमा धेरै नभनौँ होला। त्यतिखेर धम्की आयो। अहिले भने केही छैन।'
एसपी विष्टका छोरा किरण विष्टले छानबिन समितिलाई बयान दिँदाको घटना स्मरण गर्दै हामीलाई भने, 'मैले म Raw मा फोटो खिच्छु भनेको थिएँ, उनीहरुले कागजमा ‘कच्चा पदार्थ’ लेखेका रहेछन्।' Raw व्यवसायिक फोटोग्राफरहरुले फोटो खिच्दा प्रयोग गर्ने फाइल फरम्याटको नाम हो।
कारागार विभागका महानिर्देशकको नेतृत्व रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले कञ्चनपुर कारागारका नाइके टेकराज जोशीको समेत बयान लिन पुगेको छ। जसमा उनी भन्छन्, ‘यो निर्मला पन्तको हत्यामा उनको (दीलिपसिंह विष्ट) संलग्नता हुनै सक्दैन। उनले यो कार्य गरे भन्नेमा हामीलाई २०० प्रतिशत विश्वास छैन। गम्भीर षड्यन्त्र छ।'
निर्मला प्रकरणमा 'भिआइपी' कनेक्सन (#WhoKilledNirmala शृङ्खला ९) को लागी ४ प्रतिक्रिया(हरु)
Chandra basnet [ 2018-12-05 18:28:35 ]
कहिले कतै नदेखीएको निर्मलाको मामा भनाउदो जो हत्याको दिन घटनास्थलमा आएर हतारमा शब जलाउन भूमिका खेल्ने र त्यो दिन देखी गायब संकास्पद ब्यक्तिको क्रियाकलापको बिषयमा पनि अनुसंधानको तीर तेर्सिनु परो ।
Aakrosh [ 2018-12-04 15:42:49 ]
हिन्दि चलचित्र आक्रोश को अजय देभगन नेपालमा नि चाइएको जस्तो छ
बालकुमार जमरकट्टेल [ 2018-12-03 22:24:39 ]
"सरकारले आफ्नै गतिविधिहरुका कारण यो प्रकरण बल्झिरहेको छ भन्ने महसूस गरी दुई तिहाईको दम्भ नहटाएसम्म निर्मला प्रकरण साम्य हुने देखिन्न।"
रिपोर्टिङ समापन तर्फ अग्रसर देखिन्छ नि !
RS [ 2018-12-03 22:20:22 ]
दुई तिहाईको दम्भ हटनै पर्छ । जति जति घटनाहरु राजनितीकरण हुदै जान्छ त्यो त्यति नै रहस्यमय हुदै जाने गरेको छ । आफ्नो स्वाथपूर्तिको लागी यो घटना उपयोग नहोस । यसमा पहिलो पोस्टले खवरदारी गरियोस ।न्यायको आन्दोलनको आयव्ययको पारदर्शीता पनि खोजियोस ।घटनावाट असर परेका सवैको न्याय झन झन टाढा नभईदियोस ।